Minista Intanet - Ozizi
Daalụ maka ịga na peeji nke Okwu Nkụzi Anyị. Ka a gbaa gị ume ka ị na-ege ntị n'ozi sitere n'Okwu Chineke. Ozi anyị na-aga n'Intanet ga-abara Ndị Kraịst niile na ndị na-achọ ịmatakwu banyere Onyenwe anyị uru. Anyị etinyela ọnụ ọgụgụ zuru ụwa ọnụ nke okwuchukwu ndị dị n'Ịntanet site na ọtụtụ ndị nkwusa ozioma dị mma.
Na Nchịkọta Nchịkọta e depụtara n'elu ị nwere ike pịa ọ bụla n'ime njikọ ndị dị na taabụ Ozi Agụụ iji nweta nkwupụta okwu anyị n'Ịntanet.